Bayern Munich Oo Xaqiijisay In Ay Doonayso Saxiixa Leroy Sane Iyo Mustaqbalkiisii Man City Oo Mugdi Wayni Sii Galay - Gool24.Net
Madax waynaha kooxda Bayern Munich ee Uli Hoeness ayaa xaqiijiyay in ay kooxdiisu ka shaqaynayso sidii ay Man City ugala soo wareegi lahayd Leroy Sane.
Mustaqbalka Leroy Sane ee Man City ayaa mugdi ku soo jiray xili ciyaareedkan kadib markii uu booskiisii joogtada ahaa u lumiyay Raheem Sterling iyo Bernardo Silva oo qaab ciyaareed layaableh ku soo jiray.
Leroy Sane oo ka mid ah ciyaartoyda da’yarta ah ee ugu muhiimsan Man City ayaa waayay fursad uu waqti badan ugu ciyaari karo kooxda Guardiola taas oo keentay in uu heshiis cusub u saxiixo Etihad Stadium.
Bayern Munich oo ka mid ahayd kooxihii ay Man City ku garaacday saxiixa Leroy Sane ayaa markan doonaysa in ay xaalada Sane ee Man City ka faa’iidaysato.
Robert Lewandowski ayaa dhawaan sheegay in Leroy Sane uu yahay ciyaartoy isla markiiba horumarin ku samayn kara kooxdiisa Bayern Munich waxaana la filayaa in uu badal u noon doono Ribery iyo Robben oo kooxda ka baxaya.
Madax waynaha Bayern Munich ee Uli Hoeness oo wax laga waydiiyay Sane ayaa yidhi: “Anagu waxaanu la xaalaynaa ciyaartoygan”. Waana hadal shaki wayn sii galiyay mustaqbalkii Sane ee Man City.
Dhinaca kale agaasimaha ciyaaraha Bayern Munich ee Hasan Salihamidzic ayaa isna sheegay : “Ma doonayno in aanu ka hadlno magacyo, waxaanu doonaynaa in aanu isku dayno in aanu samayno xili ciyaareed cusub, sidoo kale waxaa waajib nagu ah in aanu kala cadayno lacagta diyaarka noo ah”.
Leroy Sane ayaa diyaar u ah in uu ku laabto dalkiisa Germany isla markaana uu ka ciyaaro Bayern Munich oo ah kooxda ay ciyaartoyda Jarmalka ku riyoodaan in ay ka ciyaaraan.
Laakiin ilaa hadda lama oga waxa ay Man City ka samayn doonto weerarka Bayern Munich kaga imanaya iyaga oo markii ay ka quusteen da’yarkii Chelsea ee Callum Hudson-Odoi u soo jeedsaday Leroy Sane.
Leroy Sane ayaa sanadkii 2016 kii Man City ugu soo biiray 37 milyan gini wuxuuna kooxdiisa City u soo saftay 49 kulan oo xili ciyaareedkan ah kuwaas oo uu ku soo dhaliyay 16 gool balse in badan ayuu kaydka ka soo baxay.